Blog – AHRN-Myanmar
AHRN-Shwegu DIC ၌ ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါအကြောင်း၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် နည်းလမ်းများ၊ ကာကွယ်ရေး နည်းဗျူဟာ သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ် ********************************************************* ကမ္ဘာ.ကပ်ရောဂါ ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူ AHRN – Myanmar Yangon ရုံးချုပ်မှ လမ်းညွှန်မှုများအရ ၂၂.၃.၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေနေ.) မနက် (၁၀) နာရီ အချိန်တွင် AHRN-Shwegu DIC ၌ ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါအကြောင်း၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် နည်းလမ်းများ၊ ကာကွယ်ရေး
Esteemed visitors at our Drop-in-Center and Clinic in Waimaw.
By nsadmin In Educational videos
HIV ကို ကုသနိုင်ပီလား ?
HIV ပိုးကူးစက်ခံထားရခြင်းအား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
By nsadmin In Pamphlets & Flipcharts
အက်ဖက်တမင်း အုပ်စုဝင် စိတ်ကြွဆေး
By nsadmin In Opening Job
Nurse -Counsellor (MMT-ART)(Mawlaik, Sagaing Region)
By AHRN IT In Uncategorized
TB Educational Video
The AIS Activity thrives to scale-up HIV services in Myanmar for key populations at higher risk of HIV transmission. Among the populations at risk, the AIS activity implements tailored programs for People Who Inject Drugs (PWID) to increase prevention and linkage to care. AIS partner